Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. सलमानसँग किस सिन गर्ने अर्शीको धोको – Emountain TV
सलमानसँग किस सिन गर्ने अर्शीको धोको
काठमाडाैं, १८ माघ । बिग बोसको ११आैँ सिजनबाट चर्चामा आएकी अर्शी खानले आफूलाई सलमान खानसँग रोमान्टिक फिल्म गर्न मन लागेको बताएकी छिन् । ‘म सलमानसँग रोमान्टिकका साथै किस सिन गर्न चाहन्छु,’ अर्शीले नवभारत टाइम्ससँगको अन्तर्वार्तामा भनेकी छिन्, ‘सलमानले अहिलेसम्म अनस्क्रिन कसैलाई पनि किस गरेका छैनन् । म उनीसँग रोमान्टिक तथा किस सिनमा अभिनय गर्न तयार छु।’
उनले आफूले बिग बोसको घरमा सलमानको फोटोलाई बारम्बार चुम्बन गर्ने गरेको पनि खुलाएकी छिन् । सलमानले आफ्नो फिल्ममा चुम्बन दृश्य नराख्ने गरेको जानकारी आफूलाई भएको समेत अर्शीले दाबी गरेकी छिन् ।
पर्याप्त सोचविचार नगरी बोल्ने बानीका कारण आलोचनाको सिकारसमेत हुने गरेकी अर्शीले आफू हालै एउटा साउथ इन्डियन फिल्ममा अनुबन्धित भएको र सो फिल्ममा बाहुबली प्रभासले पनि अभिनय गर्ने दाबी गरेकी छिन् ।
अर्शीले आफूलाई बलिउडमा कंगना रनावट निकै मनपर्ने बताएकी छिन् । ‘कंगना निकै बोल्ड छिन् । सत्य कुरा बोल्न डराउँदिनन्, उनमा आडम्बर छैन । म पनि त्यस्तै छु । त्यसैले मलाई कंगना बेस्ट लाग्छ । उनी नै मेरो आदर्श हुन्,’ उनको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, अन्तर्वार्तामा उनले आफूलाई महेश भट्टजस्तो निर्देशकसँग काम गर्न मन लागेको खुलाएकी छिन् । ‘मलाई महेश भट्टजस्तो निर्देशकसँग काम गर्नु छ । त्यसैले म उहाँलाई निकै फलो गर्छु,’ उनले भनेकी छिन् ।
अर्शीले अभिनय गर्ने दाबी गरिएको साउथ इन्डियन फिल्मको घोषणा भने अहिलेसम्म भएको छैन । उनी अचेल स्विमङ र जिम टे«निङ गरिरहेको बताउँछिन् ।नयाँ पत्रिकाबाट